हाम्रा सन्तानले नेपाली बोलेनन भन्दैमा नेपाली मान्दिन भन्ने तिमी को हौ? - Enepalese.com
हाम्रा सन्तानले नेपाली बोलेनन भन्दैमा नेपाली मान्दिन भन्ने तिमी को हौ?
इनेप्लिज २०७४ असार ७ गते २१:३१ मा प्रकाशित
प्रसंग हो गत शनिवार सम्पन्न ईनेप्लिज र रेडियो जिन्दगीको बार्षिकोत्सब को । उद्घोषक बडो तमझमका साथ जस्टिन बाइबरको स्टाइलमा प्रस्तुत भएका थिए । नेपालमा आफुले १७ बर्षे लामो मनोरन्जन पत्रकारिता गरेको जानकारी पनि गराए । निकै राम्रा सन्चारकर्मी पो रहेछन भन्ने मनमा के पसेको थियो मित्रले सभाहलमा सम्पुर्ण आमन्त्रीत अतिथीहरु तर्फ एक बाउन्सर हाने – ” नेपाली बोल्न नजान्ने लाई म नेपाली मान्दिन ” । उनले एक पटक हैन बारम्वार उद्घोष गरे – नेपाली नबोल्ने लाई म नेपाली मान्दिन । उनको अभिब्यक्तीलाई लिएर धेरै आमन्त्रीत समुदायका ब्यक्तित्वहरुले मन अमिलो बनाए ।
मित्र, यो अमेरिका हो । यस मुलुक र नेपालका बिच बोली चाली, ब्यबहार, मान मर्यादाको तरिका , कामको प्रकार र आपसमा गरिने ईज्जत र सदभाव ,कानून र यसको ब्यबहारिक प्रयोग लगायत अन्य दैनिकीमा आकास जमिनको फरक छ । नेपालमा म यो थिए, त्यो थिए भनेर अमेरिकामा त्यही हैसियत खोज्दै फुर्ती लगाउनुले कुनै मायने राख्दैन।
उनले ब्यक्त गरेका भनाईले समाजलाई आघात पार्ने, अपमान गर्ने, भावनामा चोट पुर्याएको ठहर गरी मैले सेतोपाटीमा एक लेख लेखे – नेपाली बोल्न जानेन भन्दैमा नेपाली हैन भन्न पाईन्छ? उनको आपत्तिजनक अभिब्यक्ती बाट निसास्सिएर बसेका समाजका धेरै अमेरिकि नेपालीहरुले यस लेखको ब्यापक समर्थन गरे, ती ब्यक्तीको आपत्तिजनक भनाई प्रती आक्रोस पोखे ।
उनले भोलिपल्ट ईनेप्लिज मार्फत रेडियो जिन्दगी र इनेप्लिज मिडियाको नाम राखी उक्त लेखको जवाफ फर्काउदै पून दोहोर्याए- “अमेरिकामा बस्ने धेरै जसो नेपालीका छोरा छोरीहरुले नेपाली भाषा बिर्सिएका छन बोल्न जान्दैनन मात्र अङ्रेजी बोल्छन त्यस्ता नेपाली नै बोल्न नजान्ने अमेरिकाको नेपालीलाई कसरी नेपाली भन्ने?” ईनेप्लिज सहितको नाम राखी दिइएको उक्त प्रतिकृया लाई एक मिडियाकर्मीले यस्तो तल्लो स्तरमा उत्रन सक्छ भन्ने अझै मैले बिस्वास गर्न सकेको छैन ।
उनको उक्त भनाई प्रती पून आक्रोस बर्सियो – समुदायका धेरैले आ आफ्नो फेसबुक मार्फत कडा प्रतिकृया दिए ।
मन भित्र कुरा खेल्यो र सोचे – हो रहेछ: बार बर्ष …. को पुच्छर ढुङ्रामा हाल्दा पनि बाङो का बाङै ।
समाजमा बसे पछी समाजको मान र मर्यादाको ख्याल गर्नु पर्दछ । जुन देशमा बसेको हो त्यस्को नियम कानूनको परिधी भित्र रहन सक्नु पर्दछ । समाजलाई आघात पार्ने, अपमान गर्ने, भावनामा चोट पुर्याउने जस्ता कृयाकलापहरु लाई जती खेद प्रकट गरे पनि पुग्दैन ।
मित्र, हाम्रा सन्तानले नेपाली बोलेनन भन्दैमा नेपाली मान्दिन भन्ने तिमी को हौ? त्यस्तो आपत्तिजनक अभिब्यक्ती दिने तिम्रो कानूनी हैसियत के छ? अमेरिकाको आप्राबासन नितीको जानकार हौ? अमेरिकामा प्रबासीहरुको मनोबिज्ञान बुझेका छौ? अमेरिका आएर अमेरिकि नेपालीहरुको सम्बैधानिक हकका बिरुद्द उनीहरुको हुर्मत लिने काम बन्द गर । त्यस्तै हाम्रो अमेरिकि नेपाली समूदायमा हुर्कदै गरेका ईनेप्लिज लगायातका मिडियाहरुको बदनाम हुने काम बन्द गर ।